Fantatro rô ny hataoko - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hateloana sisa dia hifarana ny fitetezam-paritra hataon’ireo kandida sy ny mpanohana azy. Mbola betsaka ny telo andro handresen-dahatra ireo misalasala sy tsy te hahalala. Zovy amin’ireo 33 ary no tian-droky ? “Fantatro rô ny ataoko” hoy ny mpandrabiraby.
Misy ireo efa mitonon-tena ho mpanohana. Na eo aza ireo efa vonon-kifidy dia samy nanao ny ainy tsy ho zavatra ny kandida isanisany handresen-dahatra ireo misalasala. Samy nampiasa ny fara-fahaizany ireo mpahay serasera ao anaty ekipa.
Hita tokoa fa nisy hevitra sy tetika vaovao nampiasaina nandritra izao fampielezan-kevitra izao. Feo, sary, dihy, akanjo… santionany amin’ny fitaovana nampiasaina izany.
Ny fampiasana peta-drindrina no mahazatra. Rakotry ny afisy tokoa ny rindrina. Voatemitra ny pôtô an’ny Jirama sy ny tamboho ary koa ny fialofana fiandrasana taksibe raha ny ao Antananarivo. Nifaninana ny nanindry na nanala ny afisin’ny mpifaninana ireo iraky ny kandida.
Taratasy no nahazatra raha ny peta-drindrina. Niakatra ny lentan’ny fitaovana fa nisy ireo nampiasa “vinyle”. Afisy natao tamin’ny plastika. Ny an’i Camille Vital izao dia tahaka izany. Ao koa ireo fanion. Dia mbola tahaka ilay fanamarihana teo. Misy ireo vinyle. Ohatra ny an’i Hery Vaovao. “Tsisy dikany ny vidin’ireny raha natao tany Shina ireny” hoy ity mpikarakara lanonana iray.
Tahaka izany koa ny banderole. Fitaovana nahazatra. Lamba no fampiasa. Mbola betsaka ireo kandida no nampiasa ny lamba. Fa efa maro ireo kandida no nampiasa ny labasy. Ny velarana samy manana ny azy. Miankina amin’ny toerana hametahana azy izy ireny.
Isan’ny tetika nampiasaina ihany koa ny fizarana tee-shirt. Hita ohatra ny fizarana ny te-shirt an’ny kandida iray tao amin’ny ANS (tranom-panjakana, sekoly ambony ihany koa). Tee-shirt amina arivo isa ny asabotsy 19 okitobra teo no nozaraina maimaim-poana. Nahazo ny anjarany na ankizy kely na tanora lehibebe. Ireo mpilalao baolina lavalava no teno nokinendry teo. Ireo kandida tena malaza eo amin’ny haino aman-jery no miseho malala-tanana amin’ny fizarana tee-shirt. “Firy ny akanjo nomeny anao nandritra ny fotoana nitondrany ny firenena ?” hoy ity kandida iray. Tsy naharaka no nahatonga azy niteny toa izany sa tena tsy nanao ? Tsorina fa misy tsara endrika ireny tee-shirt ireny. Tahaka ny an’ilay nomerao 10 izao dia toa ireny mpilalao baolina ireny tokoa no fahitana ireo tanora mitondra azy eny andalambe. Ny azy amin’io mbola maro no nogiazana ao amin’ny ladoany ao Ivato. Ireo kandida goavana amin’ny ara-bola dia ahitana tee-shirt karazany maro. “Arakaraka ny mpanohana ny fisian’ireny tee-shirt ireny” hoy ity mpikarakara iray. Misy izany ny tee-shirt avy amin’ny QG ary misy ny tee-shirt avy amin’ny vondrona mpanohana na comité de soutien. Arakaraka ny toerana ao anatin’ny rafitra koa ny akanjo. Tee-shirt tsotrany an’ny “be nahoana” ary polo ny an’ny mpitarika.
Toa tsy mihoatra ny 10 ireo kandida tena mizara tee-shirt ireo. Manampy an’ireny tee-shirt ireny dia misy koa ny kasikety.
Fa ny kandida Hery Rajaonarimampianina no nahitana fitaovana maro karazany indrindra. Ankoatra ireo efa notanisaina teo dia misy ny bracelet, misy koa ny lambahoany ary ny elo ho an’ny vehivavy.
Raha izany dia mitombo hatrany ny tetika madinika hisarihana ny olona hitondrany ny anaran’ny kandida mandehandeha. “Homme sandwich” no fiantsoan’ireo mpikarakara serasera izany tetika izany.
Raha tahaka izany ny hita maso dia eo ny fampaisana ny sofina. Teo ny fampiasana mpanakanto nanentana fa teo koa ny firotsahan’izy ireo lalina. Mendrika fanadihadiana manokana izany. Vokatr’izay dia hira karazany maro no re momba ny kandida iray. Mitory ady antrano ve izany teo amin’ireo mpanakanto mpanohana ? Sa vokatry ny tsy fahatokisana ka naleon’ny kandida mandrakotra sofina maro ?
Isan’ny niasa be tokoa nandritra izao fampielezan-kevitra izao ny sono mobile. Fiara nasiana fanamafisam-peo ary nentina nitety vohitra. Nandefasana hira faneva sy nanaovana fanentanana ny olona hifidy ny kandia iray.
Ireo no fitaovana hita maso ety amin’ny vahoaka. Ny isan’ny tsy hitan’ny mponina diany fampiasana ny angindimby na helikopitera, ny an’ny sasany dia jet privé (fiaramanidina raikitra manokana). Misy ireo nanofa fiara 4x4 aman-jataony isan’andro. Niarahana nandre aza ny fisian’ny fiara 4x4 350 isa nafarana hanaovana propagandy.
Na teo aza ny rehetra
“Tsy ahoako ny hirany fa ny nataony rô no lalako” hoy ity namana iray. Fantatro izay naka ny taniko. Fantatro iza no nanome fitafy ahy tao anatin’ny ririnina efa dimy taona izao no nisian’ny krizy. Fantatro izay nampanantena ka nanome. Tsaroako izay nampanantena ka tsy hita rehefa nahazo fahefana izy.
Fanaovana tsinontsinona ny firenena mahantra ny fahitana ny fanaovana fafy katrana ny vola izay tsy fanta-pihaviana avokoa. “Fantatro rô ny hataoko fa tsy omeko ny olona tsy milaza ny marina amiko ny fahefana” no tokony ho valiteny hentitra. Efa vitsy sisa kandia tavela raha izay no fenitra.